अ.पहरणमा परेकी भनिएकी चितवनकी सुजिता भण्डारीको ९ दिन पछी आज जंगलमा लहरामा अल्झिएको अवस्थामा श’व फेला ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
July 5, 2021 AdminLeaveaComment on अ.पहरणमा परेकी भनिएकी चितवनकी सुजिता भण्डारीको ९ दिन पछी आज जंगलमा लहरामा अल्झिएको अवस्थामा श’व फेला ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
चितवन, २० असार । ९ दिन अगाडी देखि बेपत्ता भएकी सुजिता भण्डारीको श.व फेला परेको छ । चितवन राप्ति नगरपालिका वडा नम्बर ३ निवासी भण्डारीको श.व चितवनको जंगलमा फेला परेको हो । उनि बेपत्ता भएपछि बहिनि अ.पहरणमा परेको भन्दै उनको दिदि मिडियामा आएकी थिइन । उनि तरकारी किन्न भनेर घरबाट निस्केपछी नफर्कीए पछी उनलाई दिदिले फोन गर्दा आफु अ.पहरणमा परेको बताएकी थिइन ।
सुरुमा जंगलमा च्याउ खोज्न आउने चेपाङहरुले सुजिताको शव फेला पारेपछि इलाका प्रहरी कार्यालयमा जानकारी गराएका थिए । सुजिताको परिवारले श’वको पहिचान गरिसकेको उनले बताएका छन । सुजिताको परिवारले श’वको पहिचान गरिसकेको उनले बताएका छन ।
सुजिताको श.व जंगलको बीचमा रहेको खोल्साको लहरामा अल्झिएको अवस्थामा फेला परेको थियो । शवको अवस्था हेर्दा उनको मृ’त्यु दुई दिन अगाडी नै भएको हुन सक्ने उनले बताए । घ’टना बारे भिडियो यहाबाट हेर्नुहोस